Xinhua Myanmar - ASIAN Academy Creative Awards 2019 ပြိုင်ပွဲ၌မြန်မာနိုင်ငံမှ “လိပ်ပြာစံအိမ် (The Only Mom)” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဆု၆ဆုရရှိခဲ့
လိပ်ပြာစံအိမ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြော်ငြာပုံများအားတွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ--လိပ်ပြာစံအိမ်FB) Culture & Entertainment
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသော ASIAN Academy Creative Awards 2019 ပြိုင်ပွဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ “လိပ်ပြာစံအိမ် (The Only Mom)” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ Regional Winners ဆု(၆)ဆု ရရှိခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ကယနေ့ထုတ်ပြန်သည့်သတင်းအရ သိရသည်။
လိပ်ပြာစံအိမ် ဇာတ်ကားသည် အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆုနှင့် အကောင်းဆုံးဇာတ်ဝင်တေးဆုများအပြင် အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာ ဆုကို “Mr. Chartchai Ketnust”မှလည်းကောင်း၊ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုကို “ဝတ်မှုန်ရွှေရည်”မှလည်းကောင်း၊ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ပို့မင်းသမီးဆုကို ကလေးသရုပ်ဆောင်“ပြည့်ပြည့်”မှ လည်းကောင်း၊ အကောင်းဆုံး ဓါတ်ပုံဆုကို “Mr. Tearawat Rujinatham” မှ လည်းကောင်း စုစုပေါင်း ဆု(၆)ဆု ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါဇာတ်ကားကို Brave Empire Entertainment ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ထိုင်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Chartchai Ketnust က မိဘနှင့်သားသမီးတို့၏ မေတ္တာတရားကို ဖော်ကျူးရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းဇာတ်ကားတွင် သရုပ်ဆောင်များအဖြစ် နိုင်းနိုင်း၊ဒေါင်း၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်၊ ကလေး သရုပ်ဆောင် ဆုရတနာ၊ ပြည့်ပြည့်၊ အောင်ခန့်ပိုင်၊ သုတ နှင့် အခြား သရုပ်ဆောင်များစွာ ပါဝင်ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုဇာတ်ကားမှာ ပြည်တွင်း၌ ရုံတင်ပြသခဲ့စဉ် ပရိသတ်ကြိုက်နှစ်သက် သော ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး စတင်ပြသချိန်မှ (၉) ရက် အတွင်း ဝင်ငွေ စံချိန်တင်ခဲ့ကြောင်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ (Xinhua)
Previous Article ပြည်သူ့အချစ်တော် ဆင်မကြီးမိုမို ၏ ၆၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲ ကို နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဉယျာဉ်တွင် မွေးနေ့ကိတ်ခွဲပြီး ကျင်းပမည်
Next Article မြန်မာ့ ရိုးရာ သီတင်းကျွတ် မီးထွန်း ပွဲတော်အား ရန်ကုန်မြို့ အထင်ကရ နေရာများ၌ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ